Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseUganda » I-Uganda iya e-Dubai: nje ukuba baphume kuluhlu olubomvu lwe-COVID
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba zaseUganda • Iindaba ezahlukeneyo
I-Uganda iye eDubai: Ilungele ukusuka
I-Uganda Airlines ikwinqanaba lokuqalisa ukuhamba ngenqwelomoya ukuya eDubai okumiselwe u-Okthobha ka-2021, kulandele iLondon kunye neGuangzhou okoko ii-Airbus zamkela ngokusemthethweni iSatifikethi soMqhubi woMoya (i-AOC) kwi-Uganda Civil Aviation Authority (UCAA) izolo, nge-23 ka-Agasti 2021, XNUMX .
Olu phuhliso luzisa esiphelweni inkqubo yeziqinisekiso ezihamba ixesha ezintlanu ezathi zabona izithuthi zomntu othwele ii-A5s zimiswe e-Entebbe.
I-airline ngoku ingatshintsha phakathi kweCRJ-900 kunye namandla aphezulu e-A330 kwiinkonzo, kuxhomekeke kubakhweli nakwimfuno yemithwalo.
Ii-A330s ziya kusetyenziswa kwiinkonzo eziya eLondon, eDubai, eMumbai naseGuangzhou nje ukuba iUganda iphume kuluhlu olubomvu lwe-COVID-19.
UMlawuli Jikelele obambeleyo we-UCAA, uFred Bamwesigye, uliqhwabele izandla iqela ngokugqitywa ngempumelelo kwenkqubo yokongeza i-Airbus kwi-Mitsubishi CRJ 900 kwi-AOC ngexesha lomsitho wokunikezela obubanjelwe e-Entebbe.
Isigaba sokugqibela senkqubo yokuqinisekiswa kwenqanaba le-5 silandele inqwelomoya ukusuka Entebbe, Uganda, ukuya eRhawutini, eMzantsi Afrika, xa ukapteni omkhulu woqeqesho uFrancis Barros kunye nokapteni omkhulu woqeqesho uPete Thomase babamba uthotho lwe-Airbus # A330-800 uNeo nge-12 ka-Agasti 2021, kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo.
Olu phuhliso luzisa esiphelweni inkqubo yokufumana isiqinisekiso esinexesha ezintlanu esibonise isibini somphathi we-A5s sizinze e-Entebbe, silinde i-AOC okoko inqwelomoya yigqibezela i-odolo yesibini ye-330 A2 ngoFebruwari evela kumenzi we-Airbus elinde i-AOC.
Ngoku inika inqwelomoya intshintshi yokutshintsha phakathi kweCRJ-900 kunye namandla aphezulu e-A330 kwiinkonzo, kuxhomekeke kubakhweli nakwimfuno yemithwalo.
Ngokwe-CEO ye-Uganda Airlines Acting CEO, uJennifer Bamuturaki, ii-A330s ziya kusetyenziswa kwiinkonzo eziya eLondon, eDubai, eMumbai naseGuangzhou nje ukuba iUganda isuke kuluhlu olubomvu lwe-COVID-19 kumazwe aya kuyo. Izithintelo eziqhubekayo zokuhamba usuka eUganda ziyibonile inkonzo ecetyiweyo eya eDubai inyibilika ngenyanga ukuya ku-Okthobha, ngelixa eya eLondon ngoku ihanjiselwe ekuqaleni kuka-2022.
ILondon, iMumbai, kunye neGuangzhou zezinye zezona ndlela zingasetyenziswanga zisuka e-Entebbe ngokungqinelana neenkcukacha-manani ezisuka ku-2019. Indlela ye-Entebbe-London yayinabakhweli abayi-84,000 ukuya nokubuya ngonyaka, kulandele iMumbai ngama-42,000 naseGuangzhou ngama-29,000. Oko kuya kumela umthwalo wemihla ngemihla wabakhweli abangama-230 phakathi kwe-Entebbe neLondon-115 ukuya eMumbai kunye nama-79 ukuya eGuangzhou.
E-Uganda, ukusukela nge-3 kaJanuwari ka-2020, ukuza kuthi ga namhlanje, nge-24 ka-Agasti, 2021, bekukho i-118,673 yamatyala aqinisekisiweyo e-COVID-19 ngokufa kwe-2,960, kuxelwe kwi-World Health Organisation (WHO). Ukusukela nge-23 ka-Agasti 2021, XNUMX, iyonke I-1,163,451 yeedosi zokugonya zenziwe.
Iiseti zejenereyitha ezintsha ezibhengezwe yiGenerac Mobile
Ibhodi yezoKhenketho yaseAfrika ithathela ingqalelo iCosta Rica njengelizwe...
ULogan Levi uthi:
Oktobha 31, 2021 kwi-06: 12
Ukuba ubukwilizwe okanye ummandla kuluhlu olubomvu lwamazwe nangaliphi na ixesha. Njengoko ilizwe libone ukuhla kosulelo, i-60-70% yabemi belizwe inokuba sele bephuhlise izilwa-buhlungu zentsholongwane. Ungaya kuphela eFransi ukuba uneendawo ezicinezelayo zokuhamba.